Zvinhu zvaunofanira kutarisa kuti Ecommerce yako ibudirire | ECommerce nhau
Iyo munda weEcommerce iri kuramba ichichinja, saka matekiniki ekushambadza akashanda gore rapfuura anogona kusashanda nhasi. Naizvozvo, hezvino zvimwe zvinhu zvaunofanira kutarisa kuti ubudirire nechitoro chepamhepo kana e-commerce saiti.
1 Kugamuchira dhizaini
2 Zvakapfuma zvemukati
3 Ecommerce saiti kuita
5 Mazhinji nzira dzekutengesa
ari mafoni efoni ivo vanomiririra yakakwira kwazvo muzana traffic kune e-commerce mawebhusaiti. Kana yako saiti yeEcommerce isina dhizaini-inoshamwaridzika dhizaini, zvinoreva kuti haina kujairana nehukuru uye kugona kweiyo mushandisi mudziyo, ine ruzivo rwako rwekutenga nekuvhura iri murombo.
Nekuti vatengi vanogona kunge vachiwedzera kuwanda kubva kuwanda iri kuwedzera yekutenga sarudzo, zvakakosha kuti upe zvemukati zvinobatsira zvinoita kuti vadzokere kuchitoro vatenge zvekare. Zvakapfuma zvemukati Zvinogona kuve zvirinani zvigadzirwa tsananguro uye mifananidzo, vhidhiyo zvemukati, zvemagariro midhiya zvemukati, kana blog zvemukati.
Ecommerce saiti kuita
ari Ecommerce nzvimbo iwo mutoro nekukurumidza, uwane zvirinani shanduko mitengo. Muchokwadi, Amazon yakaratidza kuti 100 mamiriseconds mune yekuwedzera mutoro nguva inogona kudzikisira kushandurwa kwekushambadzira neimwe muzana poindi.
Microdata Iwo ndiwo mwero une chinangwa chekubatsira injini dzekutsvaga uye mabhurawuza ewebhu kuti anzwisise zvirinani zvesaiti uye panguva imwechete zvinopa zvirinani mushandisi ruzivo Kune ecommerce saiti, iyo huru kubatsirwa inogona kunge iri munzira iyo inoonekwa mune yekutsvaga mhedzisiro.
Mazhinji nzira dzekutengesa
Kutengesa kuburikidza nzira dzakawanda dzepamhepo inogona kuwedzera kutengesa kweiyo Ecommerce saiti uye nezvayo purofiti. Saka zviri nyore kushandisa maturusi ekugadzirisa uye kugadzirisa zvigadzirwa zvekutakura, pamwe nekugadzirisa kurongeka kwekugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Zvinhu zvaunofanira kutarisa kuti Ecommerce yako ibudirire
Nei zvichikosha kuti ugadzire ruzivo rwakanangana nevatengi?